Chiedza Bhokisi, Retail Signs uye Signboard, Led Anopenya mavara - Zhengcheng
Isu tinoomerera kumusimboti wekutendeseka mukubatana kwedu, kubatana kwedu kuchava mubairo wekuhwina.
Nyanzvi chitoro pamberi zviratidzo mugadziri
Ipa chitoro chemberi masaini ekugadzira masevhisi emhando dzinopfuura zana muAsia.
Yakanakisa chigadzirwa magadzirirwo, modular kugadzirwa, nyore kuisirwa, nyore kugadzirisa, 100% isina mvura.
Tichashinga kugadzirisa matambudziko evatengi, funga zvavanoda chaizvo, uye nekupa vatengi mhinduro dzakanakisa dzemasaini.
Isu tinotarisa pane zvigadzirwa zvitsva, uye tinogara tichitsvaga mhando yechigadzirwa, chete kukupa iwe zvigadzirwa zvakanakisa.
Led acrylic yekunze signboard yewowo convenie...
Rega Zhengcheng aende kupasi, ita kuti nyika izive Zhengcheng
Sichuan Zhengcheng Starlight Energy Saving Technology Co., Ltd. yakavambwa muna Mbudzi 2013. Inyanzvi yekugadzira zviratidzo zvemukati nekunze uye zvikwangwani zvezvitoro zvinorerutsa, masupamaketi, zvitoro zvemishonga, cheni dzekudyira kwechikafu, mabhangi, zviteshi zvepeturu, nezvimwe. …
Zhengcheng Starlight Energy-saving Technology Co, Ltd yakazvipira kutsvagisa nekusimudzira uye kugadzira mabhokisi emagetsi anochengetedza magetsi, akagadzirirwa zvakanyanya zvitoro, zvitoro zvemishonga, masupamaketi, mabhangi, zviteshi zvepeturu, maresitorendi uye zvimwe zvitoro zvine cheni kuti zvigadzire zvinoyevedza. uye zvemhando yepamusoro...
Vacuum Kugadzira Chiedza Bhokisi Signboard, Pharmacy Signboard, Supermarket Signboard, Kunze Kwechiedza Bhokisi Signboard, Blister Chiedza Bhokisi Signboard, Zviratidzo Zvakavhenekerwa,